I-Sandals Emerald Bay Hosts 2022 Korn Ferry Golf Tour futhi Imemezela Imicimbi Emisha ka-2023
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » I-Sandals Emerald Bay Hosts 2022 Korn Ferry Golf Tour futhi Imemezela Imicimbi Emisha ka-2023
I-8 min ifunde
Isithombe sihlonishwa yi-Sandals Resorts
Abadlali begalofu abayikhulu namashumi amathathu nambili abavela emhlabeni wonke bajabulele uhlaza nokuluhlaza kwe-Great Exuma ngesikhathi se-Bahamas Great Exuma Classic e-Sandals Emerald Bay, esingethwe kusukela ngoJanuwari 13-19. Uma ibuyela isitolimende sayo sesihlanu, umcimbi ogunyazwe yi-PGA TOUR uvule ishejuli ye-Korn Ferry Tour yango-2022 futhi waphawula isitobhi sokuqala sohambo lwamazwe ngamazwe kusukela ngo-2020.
Njengoba ibhekene nengemuva lamanzi ase-Bahamian aluhlaza okwesibhakabhaka, isonto lomqhudelwano libe nenani lezinto ezinhle kakhulu ezijabulisayo, okuhlanganisa nomncintiswano osemthethweni we-Pro-Am e. Izimbadada Emerald Bay Golf Course, lapho abadlali abangu-68 baqhudelana khona emzuliswaneni wezimbobo ezingu-18 nokumataniswa kochwepheshe kwe-Korn Ferry Tour. Kulandela uMqhudelwano we-Pro-Am, iqembu lompetha wegalofu u-Tom Lewis ligoduke negolide emcimbini wama-VIP Awards Ceremony obuse. Izimbadada Emerald Bay nezicukuthwane zoMnyango Wezokuvakasha wase-Bahamas ezikhona, okuhlanganisa nePhini likaNdunankulu uMhlonishwa I. Chester Cooper.
Okunye okuvelele komcimbi kuhlanganisa umtholampilo ozimele wegalofu wentsha obanjelwe i-Nelson's Rangers, iqembu lomphakathi lendawo elisekelwa ngemizamo ye-Sandals Foundation, uphiko lwe-philanthropic lwe-Sandals Resorts International. Isingathwe ochwepheshe be-Foundation kanye ne-Korn Ferry Tour, inqwaba yezingane zaqeqeshwa ngokuthi zingafeza kanjani ukujika kwazo.
Umncintiswano osemthethweni we-Korn Ferry Tour uqale ngeSonto, Januwari 16, umzuliswano wokugcina uphothulwa ngoLwesithathu, Januwari 19. Ngokwemfashini ye-Sandals yeqiniso, uthando kwakuyigama lomdlalo, kanye no-caddy nentombi yakhe, u-Presleigh Schultz, 19. U-Akshay Bhatia oneminyaka engu-2022 ubudala uqokwe njengompetha wango-XNUMX we-Bahamas Great Exuma Classic e-Sandals Emerald Bay. Umongameli we-Korn Ferry Tour, u-Alex Baldwin, kanye neMenenja-Jikelele ye-Sandals Emerald Bay, u-Jeremy Mutton, babekhona emcimbini wemiklomelo.
Iqhubeka nomfutho, iSandals Resorts imemezele ukuthi izosingatha iKorn Ferry Tour's 2023 Bahamas Great Exuma Classic eSandals Emerald Bay ngoJanuwari 12-18.
Abalandeli begalofu manje sebengakwazi ukubhuka ukuhlala kwabo kweviki lomcimbi lango-2023 futhi babukele izinkanyezi ze-PGA TOUR zesikhathi esizayo ngokudlula kwezibukeli okujabulisayo okufakwe ezihambelini ze-Sandals. Okuhlangenwe nakho okuthuthukisiwe kwezihambeli kuzotholakala maduze ukuze kwengezwe kunoma yikuphi ukubhuka okusha noma okukhona kakade, okuhlanganisa amaphakheji e-Pro-Am nawe-VIP.
Idizayinelwe iNxusa Legalofu Lomhlaba Wonke le-Sandals Resorts, u-Greg Norman, I-Sandals Emerald Bay Golf Course yaziwa njengeyinde kunazo zonke futhi ingesinye sezifundo ezinhle kakhulu ezinemigodi engu-18, kanye nezifundo ezingu-72 ngasolwandle e-Caribbean, ezinezimbobo zokusayina eziyisithupha. Idizayini yezifundo ingumfanekiso oyingqayizivele wezinhlelo ezimbili ezinhle ze-eco-system lapho ingemuva eyisishiyagalolunye ikhombisa amanzi amangalisayo eduze kwe-Exuma Sound kanti ingaphambili eliyisishiyagalolunye ligqamisa imihlume emihle nezindunduma zasolwandle. Idume ngemigwaqo yayo eyinselele, imimoya yayo yokuhweba ekhona ithembisa ulwazi olusha ngomdlalo ngamunye.
Njengoba isimo sezulu sonyaka wonke esingu-80-degree kanye nendiza eqondile isuka emadolobheni amaningana ogu olusempumalanga, i-Sandals Emerald Bay imema izivakashi ukuthi ziphumule ngemva komzuliswano onezindawo zokuhlala zikanokusho, ulwandle oluyimfihlo oluyimayela elide, amachibi okubhukuda amathathu, i-5-Star Global Gourmet™ ukudla ezindaweni zokudlela eziyisipesheli eziyi-11, ezemidlalo zasemhlabeni nezamanzi ezingenamkhawulo, kanye – negalofu engenamkhawulo.
Njengoba imibhangqwana eyandayo idlala igalofu ndawonye ngenkathi iseholidini, i-Sandals Resorts iyanikezwa njengamanje izindawo zokungcebeleka zegalofu eziyisithupha ezibandakanya konke ngaphesheya kwe-Bahamas, Jamaica kanye ne-Saint Lucia, lapho imibhangqwana ingahlala ijabulela izindleko eziluhlaza ezitholakalayo kanye neziyalezo zochwepheshe emitholampilo yegalofu yamasonto onke, ngaphezu kwezindawo zokuzilolonga ezisezingeni eliphezulu. Maduze, i-Sandals izongeza indawo yegalofu entsha ngokuphelele kuphothifoliyo yayo ngokuvulwa okuzayo kwe Izimbadada Royal Curaçao le ntwasahlobo.
Sicela ufunde kabanzi mayelana ne-Sandals Emerald Bay Golf Course ewine umklomelo Chofoza lapha. Ukuze ubhukhe ukuhlala kwakho e-Sandals Emerald Bay, okuhlanganisa ne-2023 Bahamas Great Exuma Classic e-Sandals Emerald Bay, Chofoza lapha.
Izindawo zokuhlala zeSandals®
I-Sandals® Resorts inikeza abantu ababili abathandanayo iholide elinothando, i-Luxury Included® e-Caribbean ezindaweni zayo ezimangalisayo ezingu-15 ezingasogwini e-Jamaica, e-Antigua, e-Saint Lucia, e-Bahamas, e-Barbados, e-Grenada, kanye nendawo entsha yesi-16 eza eCuraçao April. 2022. Sigubha iminyaka engu-40, inkampani ehamba phambili ehlanganisa konke okubandakanya izindawo zokungcebeleka inikeza ukufakwa kwekhwalithi eyengeziwe kunanoma iyiphi enye emhlabeni. I-Sandal Resorts ekhethekile ihlanganisa isiginesha ye-Love Nest Butler Suites® eyimfihlo kanye nesevisi; izitsha eziqeqeshwe yiGuild of Professional English Butlers; i-Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet™ yokudlela, eqinisekisa utshwala obuphezulu, iwayini eliphambili, nezindawo zokudlela eziyisipesheli; Izikhungo ze-Aqua ezinezitifiketi nokuqeqeshwa okungochwepheshe be-PADI®; i-Wi-Fi esheshayo ukusuka ogwini kuya ekamelweni lokulala kanye Nemishado Eyenziwe Ngokwezifiso Izimbadada. I-Sandals Resorts iqinisekisa izivakashi ukuthula kwengqondo kusukela ekufikeni nasekuhambeni Izimbadada zePlatinum Protocol zokuhlanzeka, izinyathelo ezithuthukisiwe zezempilo nokuphepha zenkampani eziklanyelwe ukunikeza izivakashi ukuzethemba okukhulu lapho zivakashele e-Caribbean kanye ne-Sandals Vacation Assurance, uhlelo oluphelele lokuvikela iholidi olunesiqinisekiso sokuqala somkhakha sokuthatha indawo yeholide yamahhala okuhlanganisa nemali yendiza yezihambeli ezithintwa Iziphazamiso zokuvakasha ezihlobene ne-COVID-19. I-Sandals Resorts iyingxenye yomndeni wakwaSandals Resorts International (SRI), eyasungulwa ngongasekho u-Gordon “Butch” Stewart, okuhlanganisa nezindawo zokungcebeleka ezigxile emndenini ezigxile emndenini. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nomehluko we-Sandals Resorts Luxury Included®, Chofoza lapha.
I-Caribbean Covid-19 Exuma Golf Jamaica Platinum Izimbadada Yezimbadada Ezokuvakasha Wi-Fi
Ihhotela elisha le-RIU eligqekeza e-Trelawny Ngenyanga ezayo
I-Jamaica Tourism Iqinisa Ubudlelwano Obusha Bezokuvakasha ne-Dominican Republic
Iphrojekthi ye-ECHO: Amahhotela angama-50 asayiniwe umnotho omusha...
Izindlela Zokugubha I-Yellowstone National...
Uhulumeni waseCanada: Inhloso yokuhweba ngezimboni ezidala...
Ucwaningo Olusha Lokusebenzisa I-Psychedelics Ukulwa Nengqondo...
Isidingo somhlaba wonke se-IMEX Frankfurt uphawu oluhle
Ukudla okusekelwe ezitshalweni kukuyo yonke indawo: Kuthiwani nge-vegan sushi?
Imithi Emisha Engaba Khona Yomdlavuza kanye Nezifo Ezithathelwanayo
Usayizi Wemakethe Ye-Citrus Pulp, Yabelana, Imephu Yomgwaqo Yekusasa...
Indiza enetimu yokusimama yaseTurkey Airlines ithatha...
Umdlavuza Wengqamuzana Ongewona Omncane Wamaphaphu: Idatha Entsha Ye-Preclinical
I-FICCI Ithuthukisa I-Digital Drive e-India ngokuzayo...
I-Ankylosing Spondylitis Treatment Usayizi Wemakethe, Yabelana...
Ukuhlolwa Okusha Komtholampilo Kwe-Relapsed Acute Lymphoblastic...
Izizathu Eziphezulu Zokwenza Ukuhamba Kuyindlela Engcono Kakhulu Yemfundo
Ucwaningo Olusha Lomtholampilo lokwelapha izimila zesibindi
Ukubuyiselwa kokuhamba kwebhizinisi lomhlaba wonke kubona ukwanda kwamadijithi amabili
I-Lithuania iyalela ukuthi kuphume inxusa laseRussia
I-IATA: Inqubekelaphambili ekuvuleni kabusha umhlaba ozohamba
I-Malta Tourism Imemezela Injabulo Yamazwe Ngamazwe...
I-Air Lease Corporation i-oda amajethi amasha angama-32 e-Boeing 737 MAX
Isinqumo Sejaji Likahulumeni: Azikho Imaski Ezindizeni?
Ukuvula Ukwelashwa Kwezifo Ezishayela Iningi Labantu...
Uyakuthanda ukubhala futhi unaka kakhulu imininingwane.